Halkee kale ayay dunida uga keydsan tahay kimikadii ku qaraxday Beyrut? | Gaaroodi News
Halkee kale ayay dunida uga keydsan tahay kimikadii ku qaraxday Beyrut?
Halkee kale ayay dunida uga keydsan tahay kimikadii ku qaraxday Beyrut? Warshad soo saarta Ammonium nitrate oo ku taalla FaransiiskaImage caption: Warshad soo saarta Ammonium nitrate oo ku taalla Faransiiska
Mas’uuliyiinta gobolka koonfurta ee Tamil Nadu ayaa dacwad ka gudbiyay shirkaddii maaddada ammonium nitrate ka kentay Kuuriyada Koonfureed sannadkii 2015-kii, taas oo ku anddacootay in loogu talagalay maaddadaas bacriminta. Qaraxii Beyrut
Dowladda Ciraaq waxay amar ku bixisay in dib u eegis deg deg ah lagu sameeyo walxo halis ah oo lagu keydiyay dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee dalkaas, waxay ogaadeen in ammonium nitrate lagu keydiyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Baqdaad. Shixnad ammonium nitrate ah oo lagu qabtay Indonesia sanadkii 2016-kii